Mara aghụghọ kacha mma nke Crash Bandicoot Na -agba ọsọ | Androidsis
Mara aghụghọ kachasị mma nke Crash Bandicoot Na Run
N'ịchọ imeri ọkwa niile, na Crash Bandicoot Na Run Ị ga -esorịrị obere ntuziaka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iru 100% nke nnyefe a. Iji rite uru na nke a, ọ kacha mma ịtụle site na mbido ruo na njedebe na nkeji nkeji a nke Crash Bandicoot wepụtara maka nyiwe gam akporo na iOS.
Mara aghụghọ kachasị mma nke Crash Bandicoot Na Run, egwuregwu vidiyo nke enwere ike ịkpọ na ekwentị mkpanaaka, mbadamba yana ogologo oge na PC ekele ndị na -eulaomi. Na PC, ị ga -achọ ụfọdụ obere ihe ndị ngwa ga -achọ, ọkachasị ka ọ na -aga nke ọma.
Agwaetiti ọ bụla bụ ụwa juputara na ọrụ, ọtụtụ n'ime ha dị mgbagwoju anya, mana ị ga -emerịrị nsogbu ọ bụla. Crash Bandicoot Na Run na -emikpu gị n'ime ụwa na -atọ ụtọ ị ga -ejikwa ụlọ nyocha Nitro na ihe ya mepụta ma mee ka ọ na -arụ ọrụ oge niile.
1 Ụlọ nyocha Nitro, ezigbo enyi gị
2 Yiri uwe kwesịrị ekwesị maka ọrụ ọ bụla
3 Ozi mkpokọta mkpofu
4 Anakọta Ike bara nnukwu uru
5 Jikwaa oge nke ọma
6 Nweta ụgwọ ọrụ maka ihe ndị ị rụzuru
7 Gwuo na PC
Ụlọ nyocha Nitro, ezigbo enyi gị
Otu akụkụ na -adọta mmasị pụrụ iche nke Crash Bandicoot On Run bụ ụlọ nyocha Nitro. Mmepụta nke ihe na -aga n'ụlọ nyocha, yabụ ị ga -ewepụta ihe niile ịchọrọ n'oge egwuregwu egwuregwu. Ọ ga -ewe ntakịrị mbọ, mana ịga ụlọ nyocha dị mkpa.
Ọ kacha mma ịhapụ ọrụ ogologo oge maka oge ndị ahụ mgbe ị na -enweghị ike ịme oge akọ, ebe ọ bụ na ha bụ ọrụ ogologo oge. Ndị ọzọ dị mgbagwoju ọzọ, mara dị ka ogologo, nwee oge ga -adị n'etiti nkeji 5 ruo 10, dabere na ozi ọ bụ.
Gbalịa mgbe niile ịgabiga ụlọ nyocha Nitro, ebe ọ dị mkpa ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe kwesịrị ekwesị. Na Crash Bandicoot Na -agba ọsọ ihe niile na -aga nke a na ndị ọrụ, ma isi na sekọndrị nke ị ga -eme.
Yiri uwe kwesịrị ekwesị maka ọrụ ọ bụla
Ekike dị iche iche abụghị naanị ọdịdị dị iche maka agwa ọ bụla. Na Crash Bandicoot Na -agba ọsọ, ngbanwe ahụ dị mkpa, ebe ọ ga -enye ego dị iche maka ọganiihu ọ bụla na maapụ dị iche iche. Ego a bụ ihe pụrụ iche, yabụ gbalịa jiri uwe dị iche iche gafee otu oge ọtụtụ oge.
Uwe Apocalyptic Coco na -enye gị ohere iji nkpuchi Aku Aku malite ozi ọ bụla, ozugbo ị meriri ndị iro, ị ga -enweta 40% Nitro na 40% Ice Berries site na igbe. Ekike ndị ọzọ nwere ego ga -adịgasị iche n'oge egwuregwu ahụ, yabụ na ọ dị mma iji ha niile.
Ọ dị mkpa karịa na ị na -eyi uwe kwesịrị ekwesị mgbe niile Maka ihe ahụ ịchọrọ ịkọ ugbo, ụfọdụ ejiji Crash Bandicoot On Run ga -ahapụ gị ka ị jiri nkpuchi ọla edo Aku Aku malite. Nke ọla edo ga -enyere aka ịga n'ihu na ọkwa ndị ahụ dị mgbagwoju anya, na -enyere aka mezue akụkụ dị mgbagwoju anya.
Ọ bụrụ na ị yi uwe Apocalyptic Coco ị ga -enwe ike iji nkpuchi Aku Aku malite ihuenyo ọ bụla, na -abawanye iko ị na -enweta mgbe ị na -emeri ndị iro Nitro na 40%. Ọ bụrụ na iji uwe ndị ọzọ eme ya, ị ga -enweta ego ego yiri ya na -emezi nsonaazụ ya mgbe ị na -akọ ugbo.
Ozi mkpokọta mkpofu
Otu n'ime ihe iji mezue na Crash Bandicoot Na -agba ọsọ bụ ọrụ nchịkọta. Ihe ndị ị na -enweta bụ ihe dị mkpa iji mee ka ọrụ dị iche iche nke ntọala ahụ nwee ike. Site na ha ị nwere ike wepụta ihe mgbawa na ị gaghị enwe ike nweta akụkọ akụkọ dị iche iche.
Ihe ị ga -enweta nwere oke n'agwaetiti ọ bụla, ọkwa ga -enye ndị dị mkpa ka ha gaa n'ihu na -aga n'ihu na akụkọ a. Kpochapụ ihe niile dị n'agwaetiti ọ bụla mgbe ị na -achọ ugbo, nke a ga - eme ka ị were oge dị nkọ maka onye ọ bụla n'ime ha, mana ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ịnakọtaghị ha, ị ga -atụfu nnukwu ihe, yabụ, agala ngwa ngwa na maapụ nke ọ bụla, were oge gị gaa n'ihu n'enweghị ihe ọ bụla kwụsịrị gị. Crash Bandicoot Na Run nwere ọtụtụ aghụghọ, mana nke mbụ ị ga -emerịrị ọkwa 100% na nsonaazụ ya niile.
Anakọta Ike bara nnukwu uru
Crash Bandicoot Na -agba ọsọ nwere ọtụtụ akpụkpọ anụ akpọchiriIji kpọghee ya, ihe dị mkpa bụ ijide ihe bara nnukwu uru. Iji nweta ego bara nnukwu uru, ị ga -emerịrị ndị isi ikpeazụ nke agwaetiti ọ bụla, nwaa ihe niile iji merie ha ma jiri ngwa ọgụ gị kacha mma mee ya.
Ị kpọghee ihe niile pụtara n'egwuregwu ahụ, ị ​​ga -emerịrị ọrụ niile, ka ị hụ agwaetiti niile ị ga -aga n'ihu, oghere nrụpụta n'ime ụlọ nyocha, isi tiki na sistemụ trophy ọhụrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ị nweghị ike ịhapụ ọrụ ọ bụla, ha niile dị mkpa.
Ọ dị mkpa ka ị mezue ihe niile bara nnukwu uruỊ ga -eji ha mepee ihe niile, na -ahapụrụ aha gam akporo gam akporo nke nwere ihe ịga nke ọma nke ukwuu. Ihe karịrị nde nbudata nde 10 na -akwado aha a dị oke ọnụ ahịa, nke nwere ngalaba eserese dị mkpa yana ọtụtụ ọrụ nkwado.
Jikwaa oge nke ọma
Oge bụ ezigbo ndị enyi gị na Crash Bandicoot Na Run. Mgbe ị ga -ezute onye iro, merie ngwa ngwa a wee bido ozi ọzọ. Ọ bụrụ na ị tufuo oge dị ukwuu, ị gaghị enweta ihe ị na -achọ, yabụ ọ kacha mma ka ị lụọ ọgụ wee merie ozugbo enwere ike.
Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị ga -anakọta ihe ọ kacha mma iwepụta oge ịchọrọ, oge a ga -amasị gị n'ihi na ị ga -eme ihe na maapụ. Na Crash Bandicoot Na -agba ọsọ ọ kacha mma ịnweta ihe niile bara nnukwu uru ma gbanwee ka ị nwere ike.
Mmezu dị mkpa dị ka ịmecha ozi, ihe kacha mma bụ na ị ga -amụta agwaetiti ọ bụla ma ghara ịhapụ ihe ọ bụla. N'egwuregwu a, nwaa ịlaghachi ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ nọmba nke mbụ, ebe ihe niile nwere mmalite yana njedebe ya, oge.
Nweta ụgwọ ọrụ maka ihe ndị ị rụzuru
Ọ bụrụ na ị mezue akụkụ ọ bụla nke egwuregwu ị ga -enweta ụgwọ ọrụ, ha niile dị oke mkpa na ịnweghị ike ịhapụ nke ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ mezue ya 100%. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibuli ọkwa ngwa ngwa ma ọ bụ nweta ihe nrite, ọ bụ isi ihe na -agaghị agbaghara gị, yabụ nweta ha.
Ihe nrite ndị a nwere ike ịdị mkpa, yabụ ọ kacha mma ka ị na-aga n'ihu ọ bụla nweta ọtụtụ n'ime ha, ọkachasị ụgwọ ọrụ ama ama. Ọtụtụ ndị egwuregwu na -ahapụ nke a n'azụ, mana ndị ọzọ na -egwu egwu n'iweta ihe niile iji mezue Crash Bandicoot Na -agba ọsọ n'ụzọ ọ bụla.
Gwuo na PC
Crash Bandicoot: Na Run na -ahụ ìhè nke ụbọchị na gam akporo na iOS naanị, mana nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike igwu ya n'elu ikpo okwu kachasị amasị ọtụtụ, PC. BlueStacks bụ otu ikpo okwu ebe enwere ike ịkpọ ya site na iulatingomi egwuregwu vidiyo a ma ama nke onye nrụpụta King mepụtara.
BlueStacks abụghị naanị emulator nwere ike ịkpọ ya, enwere ọtụtụ na -emekwa ka ọ bụrụ eziokwu, gụnyere MeMu, KOPlayer, BlissOS, n'etiti ndị ọzọ. BlueStacks na -enye ohere ahụmịhe dị ukwuu site na ijikọ ngwaọrụ dị iche iche na -eme ka ọ dị iche na ngwa ndị ọzọ.
Enwere ike iji ya keyboard, yana yana pad site na onye nrụpụta ọ bụla nke PC ghọtara, site na Bluetooth ma ọ bụ eriri. Ọ kacha mma ịnwe sistemụ njikwa dị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwere òké na keyboard dabara maka egwuregwu, nke a na -akwụkarị ọnụ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mara aghụghọ kachasị mma nke Crash Bandicoot Na Run
Esi zoo IP na gam akporo